Photo Effect - Photoshop ဖြင့်ဓါတ်ပုံများဖြတ်ကပ်ပြုလုပ်ခြင်း ပြန်လည်မျှဝေသည် ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » photoshop သင်ခန်းစာများ » Photo Effect - Photoshop ဖြင့်ဓါတ်ပုံများဖြတ်ကပ်ပြုလုပ်ခြင်း ပြန်လည်မျှဝေသည်
Sunday, May 11, 2014 photoshop သင်ခန်းစာများ
ဒါလေးကတော့ Photoshop နဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ဘယ်လိုဖြတ်ကပ် လုပ်လဲဆိုတာ ပြပေးသွားပါ့မယ်..။ သူငယ်ချင်းတို့ အတွက်အများကြီး အဆင်ပြေမယ့် နည်းလေးလို့ ထင်ပါတယ်..။ Photoshop နဲ့ဓါတ်ပုံပြင်တာ အရမ်းတတ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်..။ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်း ခဏခဏမေးတယ်..။ သူ့ကိုလည်း ဒီနည်းလေးနဲ့ အခြေခံစပေးခဲ့တာ.. အခုတော့ သူကတော်တော်လေး လုပ်တတ်နေပါပြီ.. ဒါကြောင့် မလုပ်တတ်သေးတဲ့သူများအတွက် Photoshop အခြေခံရအောင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လွယ်တဲ့ ဒီနည်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
အရင်ဆုံး Photoshop ရဲ့ File >> Open ကနေ မိမိတို့ ပြုလုပ်ချင်တဲ့ ပုံကိုယူလိုက်ပါ..။ အောက်မှာတော့ ကျနော်က အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့ ပုံနှစ်ပုံကို တခါတည်း ရွေးယူလိုက်ပါတယ်..
အပေါ်ပုံအတိုင်း ပုံတွေရောက်လာပြီိဆိုရင် ဖြတ်ရလွယ်တဲ့ 1 နေရာက Pen Tool (P) နဲ့ ဖြတ်ပါမယ်.. အောက်ပုံအတိုင်း နံပါတ်စဉ်လိုက် ကြည့်သွားလိုက်ပါ.. ဒီနေရာမှာ တခုမှာချင်တာက ပုံတွေကို ဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် မိမိတို့ ဖြတ်မယ့်ပုံကို ကီးဘုတ်က Ctrl+(+) နဲ့ ပုံကြီးဆွဲချဲ့ပြီးမှ ဖြတ်ပါ.. ပုံကြီးချဲ့ပြီး ဖြတ်တဲ့အတွက် ပုံရဲ့အနားစတွေ ညီနေမှာဖြစ်ပါတယ်.. အောက်ပုံမှာဆက်ကြည့်ပါ..
ဖြတ်ပြီးရင်တော့ ပုံနှစ်ပုံကို ယှဉ်ထားပါ.. ဖြတ်ထားတဲ့ပုံကို Move Tool နဲ့ တခြားပုံပေါ်သို့ ဒရော့ဆွဲ ထည့်လိုက်ပါ.. အောက်ပုံမှာ ဆက်ကြည့်ပါ..
အပေါ်ပုံအတိုင်း တခြားပုံပေါ်သို့ ရောက်သွားပြီဆိုရင်.. အောက်ပုံအတိုင်း ဆက်လုပ်ပါ..
ကီးဘုတ်မှ Enter ခေါက်ပြီးရင် အောက်ပုံအတိုင်းမြင်ရပါပြီ.. ပြီးရင်တော့ ပုံနှစ်ခုဆက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ လည်ပင်းနေရာကို Eraser Tool ဖြင့် ညီအောင် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပွတ်တိုက်၍ ဖျက်ပေးပါ..
အောက်ပုံအတိုင်း Eraser Tool ကလစ်ပြီးရင် သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ တူးများကို လိုက်ချိန်ပေးပါ.. ဒီနေရာမှာ ကျနော်ပြတဲ့အတိုင်း လုပ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး.. မိမိတို့ ပုံနဲ့ အဆင်ပြေမယ့် Brush Size , နဲ့ Opacity ကို အဆင်ပြေသလို ချိန်ယူပါ.. အဓိက,က ပုံကြည့်ကောင်းဖို့ လိုပါတယ်.. ကျနော်လုပ်ပြတဲ့ ပုံကလည်း ကြည့်ကောင်းချင်မှ ကြည့်ကောင်းလိမ့်မယ်.. ဒီနေရာမှာ အခြေခံ တတ်ဖို့ကိုသာ အဓိကထားတဲ့အတွက် ကျနော်လုပ်ပြတဲ့ပုံ ကြည့်မကောင်းခဲ့ရင် နားလည်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်.. အောက်ပုံတွေအတိုင်း ဆက်ကြည့်ပါဗျာ..
အပေါ်ပုံအတိုင်းဆိုရင် ကြည့်လို့ အဆင်ပြေလောက်ပြီထင်ပါတယ်.. အောက်ပုံကတော့ ခေါင်းကို ရှေ့နည်းနည်းငိုက်ပေးလိုက်တ်ာပါ.. Ctrl+T နဲ့ ဘောင်ပေါ်လာရင် မောက်စ်ဖြင့် ထောင့်လေးတွေကို ထောက်ပြီး.. လှည့်ပေးနိုင်ပါတယ်.. စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ရင် Enter ခေါက်ပါ..
ပြီးရင်တော့ ပုံကို Ctrl+(-) နဲ့ Zoom ပြန်ချုံ့လိုက်တာပါ.. ဒီလောက်ဆိုရင် ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်..
အပေါ်ပုံအတိုင်း ပုံကိုသိမ်းလိုက်ရင် အောက်ပုံအတိုင်း ရလာပါပြီ...
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ပုံတွေကို ဖြတ်ကပ် လုပ်တတ်လောက်ပါပြီ .. အားလုံးပဲ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်၍ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ...
Download အဆင်မပြေရင် ပြောပါ.. အဆင်ပြေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပေးပါမယ်...
Hip Hop Rinetones
Android ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာစာဖောင့်တွေနဲ့ မြန်မာစ...
အမျိုးကောင်းသား နည်းပညာသတင်း (Offline Readers.apk)...
Root checker .apk
အရမ်းလန်းတဲ့ Next Music.Apk
MMIT Knowledge. နည်းပညာ Offline Reader
HTC Firmware တင်နည်း နှင့် ဗဟု သု တ
New Nokia Zawgyi Keyboard
မည်သည့် Windows Login password ကိုမဆိုကျော်ဖြတ်နည်...
(မှတ်စုစာအုပ်) With account and password.Apk
စကားပုံများ စုစည်းမှု (ဗဟုတုတ.Apk)
စက္ကူ​လေး​တွေ​ခေါက်​ရ​အောင်​.(For Fun ,Apk)
Cooking (Knowledge.apk) for Lady
ဖိုတိုရှော့ ၀တ်စုံ (၄)
ဖိုတိုရှော့ ၀တ်စုံ (3)
Huawei ဖုန်းဝယ်ရင် စမ်းသပ်ကြည့်နည်း
internal memory full space ဖြစ်နေရင်
အချက်ပေါင်းမျာစွာ ဆက်တိုက်နှိပ်မိ၍ ဖုန်းစခရွန် မြင...
Gird Body Symbol Camera
ဖုန်းကိုလှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ Screen Shot လုပ်နိုင်တဲ့ a...
A+ မြန်မာလိုစာအုပ် (မျိုးသူရ)
MMSD 4.3 Gapp
Viber Sticker Hacking
Princess Atspa Salon
Animated GIF producer 5.2 TRIAL(Animation ပုံလေးလေ...
Photo Effect - Photoshop ဖြင့်ဓါတ်ပုံများဖြတ်ကပ်ပြ...
Fire Brush Tool (2MB)
ပိုတိုရှော့ အတွက် အသင့်လုပ်ပြီး ယောကျာင်္းလေးပုံ (20...
ပိုတိုရှော့ အတွက် အသင့်လုပ်ပြီး မင်္ဂလာစုံတွဲ PSD 16...
Photoshop မှာ အလွယ်တကူ ရောင်စုံအသုံးပြုနိုင်မည့် B...
Job Man Fashion
Man Body Buider
CDMA 800 MHz အတွက် Huawei ရဲ့ Model သစ် C8816 ( မြ...
MMSD Sony Font Installer (Android 4.0 အထက်ရှိ Sony...
Sony ဖုန်းများအားလုံး Fireware ရေးနည်း
C8813,C8813D,Y300C..ect စသောဖုန်းတွေမှာ အဖြစ်များတ...
အဆင်ပြေပါစေ..ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)Download ...
ADB Command အသုံးပြုနည်း (၁)
Navy Carrier Game
Fighting Tiger Game
Gtune music download.APk
300 Spartans game
3D Solidier Sniper
SD memory cards တွေကိုformats ချချင်တဲ့သူငယ်ချင်းမ...
PDF ဖိုင်တွေ ဖတ်တဲ့အခါ တစ်ရွက်ချင်းလှန်ဖတ်လို့ရတဲ့...
3D Design ဖန်တီးချင်သူတွေအတွက်
Post For Readers
အိမ်မှုရေးရာ အဖြာဖြာ (ဗဟုတုတ Apk)
Tatoo Camera .Apk
PATTERN / PIN LOCK အပြင် GMAIL ACCOUNT တွေကို ဖြည်...
Android Phone ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေ အတွက် Pattern Loc...
** ဘာခလုတ်မှ မနှိပ်ပဲ screen on/off နဲ့ Lock ပါ ပြ...
C8815 / Y210-2010 Internet Setting ချိန်နည်း
Android ဖုန်းမှာ Pattern Lock မေ့သွားသူများအတွက် P...
Pattern Unlock tool (Beta) for Root android device...
Pattern Lock မေ့နေသူများအတွက် Factory Reset မချဘဲ ...
Download Brazer Pro
Gears Of World War
Mission Top Sniper
All Update Reader (black virsion)
Huawei U 8825 လိုင်းမတက်တာလေးပါ....